Zanadralambo - Wikipedia
1 NY HEVINY
2 NY RAZAMBE 3 NIPOIRAN'NY SOKAJIN'NY ZANADRALAMBO
3 NY TOERANA AHITANA AZY
4 NY ANDRAIKINY
5 NY FOMBANY
Ny teny hoe "Zanadralambo" dia anarana niantsoana ny iray amin'ireo sokajin'andriana nisy tao amin'ny Fanjakana Merina sy ny Fanjakan'Andrian'ny Madagasikara.
Nanambady maro ny Mpanjaka Ralambo, Mpanjakan'Imerina, nonina sy nanjaka teo Ambohidrabiby Hasin'Imerina tamin'ny taona 1575-1600 tao aorian'i JK,ary niterahany maro ireny vadiny andriambavy. Mba hisorohana ny ady fanjakana teo amin'ireo taranany sy ireo andriana maro havany teo amin'ny fanjakany dia namorona sokajin'andriana efatra izy, izay ipoiran' ny mpanjaka eto Imerina, dia ny Andriantompokoindrindra, ny Andrianamboninolona, ny Andriandranandony ary ny Zanadralambo,.
Ny sokajy fahaefatra amin'ny andriana dia nampitondrain-dRalambo ny anarany ka nataony hoe "Zanadralambo". Arak'izany, ny "Zanadralambo" dia misy amin'ny Zanadralambo no taranaky Ralambo ary misy amin'ny Zanadralambo no tsy taranaky Ralambo mivantana fa havany ary andriana ihany. Ankoatr'izany, misy amin'ny taranaky Ralambo no tsy natao ho isan'ny Zanadralambo toy ireo teraky Ralambo sy ny vadibeny dia Andriatompokoindrindra sy Ravaomasina. Ny zanaky Ralambo tamin'ny Ratsitohinamanjaka vadikeliny dia nataon-dRalambo ho isan'ny Zanadralambo amin'Andrianjaka.
NY RAZAMBE 3 NIPOIRAN'NY SOKAJIN'NY ZANADRALAMBOHanova
Misy karazany telo ny razambe niandohan'ny sokajy Zanadralambo dia ny taranaky ny Mpanjaka Ralambo tamin'ireo vadikeliny, ireo havan'ny Mpanjaka Ralambo izay nosokajian'io mpanjaka io ho Zanadralambo ary misy hova natao andriana ka natao ho isan'ny Zanadralambo. Fanavahana fotsiny ihany izany saingy mitovy firazanana izy ireo dia samy Zanadralambo. Ny mpanjaka Ralambo dia teo androvan'Ambohidrabiby no nonina ary ireo Zanadralambo sy ireo taranany dia nomeny zara-tany manodidina an'Ambohidrabiby renivohim-panjakana.
1) Ireo taranaky ny Mpanjaka Ralambo tamin'ny vadikeliny andriana dia natao hoe " Zanadralambo amin'Andrianjaka". Miisa 4 izay ireo dia ireto avy: Andriampolofantsy ; Andriampanarivomanga ; Andriamasoandro; ary Andriantompombe .
Andriampolofantsy no lahimatoan'ny Zanadralambo amin'Andrianjaka. Amin'ny maha-lahimatoa an'Andriampolofantsy dia tao avaratr'Ambohidrabiby eo atsimon'ny Talata volonondry ary somary avaratry Falimanjaka, dia tao Ambohimanarivo no zara-tany nomen'ny Mpanjaka Ralambo an'Andriampolofantsy zanany tany amboalohany. Tato aoriana dia nifindra nonina tao Ankadimanga izay mbola eo avaratr'Ambohidrabiby ary atsimon'ny Talata volonondry i Andriampolofantsy sy ny ankohonany ary ireo mpanaraka azy. Rehefa izany dia niala teo Ankadimanga izy ka nifindra nonina teo Ankazobe izay eroa andafy antsinanana atsimon'Ambohidraabiby. Ary avy eo Ankazobe indray vao nifindra nonina nankeo Atsomangy ao atsimon'Ambohidrabiby. Nananjanaka roa lahy izy ka ny lahy matoa izay lehilahy manankaja natao hoe Andriamahatsiraina dia napetrany tao avaratr'Atsomangy amin'ny toerana hoe "Andafiavaratra" ary ny faralahy kosa Andriamasina dia nidina nonina teo ambany atsimon'Atsomangy amin'ny toerana atao hoe Ambany atsimo. Avy eo Atsomangy kosa no nisy nifindra monina nankeo Ambohitrantenaina. Andriantompombe dia tao andafy avaratra antsinanan'Ambohidrabiby tao atsimon'ny Falimanjaka amin'ny tanàna atao hoe Ambohidalona no zara-tany nomen'ny Mpanjaka Ralambo rainy azy ary mbola ao ny fasana nanafenana an'Andriatompombe. Ny taranak'Andriatompombe kosa dia niala teo ka nifindra monina any atsimon'Ambohidrabiby dia ao Ambatofotsy avaradrano sy ao Sabotsy Namehana. Andriamasoandro kosa dia napetraky ny mpanjaka Ralambo rainy tao andafy atsimon'Ambohidrabiby ao Manandriana. Andriampanariomanga kosa dia teroa andafy atsimo andrefan'Ambohidrabiby no zara-tany nomen'ny Mpanjaka Ralambo azy. Rehefa nanambady an'i Ravadifo zanak'Andriampanarivomanga ao Lazaina ny mpanjaka Andrianjaka dia novaina tato aoriana ho ny terak'Andriampanarivomanga no zokiny amin'ny Zanadralambo amin'Andrianjaka.
Ny taranaky Ralambo tamin'i Ravoromanga izay natao hoe Zafindravoromanga dia mitonona ho isan'ny Zanadralambo ihany koa saingy tsy isan'iretsy Zanadralambo amin'Andrianjaka akory. Ravoromanga dia niaranonina tamin'ny Mpanjaka Ralambo sy ny zanany telolahy tao androvan'Ambohidrabiby ary nafenina ao ambany antsinanan'Ambohidrabiby ao atsimon'Anjanakarivo andrefana. Ny zanaka telolahin'ny Mpanjaka Ralambo tamin'ny Ravoromanga kosa dia nomen'ny mpanjaka Ralambo zaratany any avaratr'Ambohidrabiby dia tao Ambohitrolomahitsy ary tato aoriana dia nifindra monina ao Ambohijanamasoandro avaratr'Ambohimanga.
2) Ireo Zanadralambo tsy mba nateraky Ralambo fa fianakavian-dRalambo no natao ho isan'ny sokajin'ny Zanadralambo dia maro. Voalohany amin'izany ny Andriamaneforalambo izay nomen'ny mpanjaka Ralambo zaratany any avaratra antsinanan'Ambohidrabiby dia ao Ankorombe avaratry Talata volonondry. Araka ny lovantsofina dia taranaky Rabiby raiben-dRalambo ity Andriamaneforalambo ity no fianakavian'ireo Andriandoriamanjaka koa. Vinanton-dRalambo rahateo koa Andriamaneforalambo satria ny vadiny dia zanaka nateraky Ralambo. Izany rehetra izany angamba no isan'ny nanasokajian-dRalambo ny terak'Andriamaneforalambo ho isan'ny Zanadralambo ary izy ihany amin'ny Zanadralambo no mitondra ny anarana "Ralambo". Arak'izany, ny Zanadralambo avy amin'Andriamaneforalambo dia taranaky Ralambo avy amin'ny vadin'Andriamaneforalambo fa tsy avy amin'Andriamaneforalambo razambe akory. Misy lovantsofina milaza fa Rafotsimarovahoaka razan'ny ampahany amin'ny Zanadralambo ao Ambodifahitra dia taranak'Ankorombe no nifindra monina teo. Manaraka izany dia ny tera-dRambavy ao Masindray ambadik'Ambohimanambola. Rambavy moa dia zanak'Andrianamboninolona tamin'ny vadikeliny, koa tsy nataon-dRalambo ho Andrianamboninolona ny tera-dRambavy fa nataony ho Zanadralambo ny firazanan'ny teradrambavy ao Masindray. Ary farany, ny taranak'Andrianakotrina izay nomen'ny mpanjaka Ralambo zaratany any antsinanan'Ambohidrabiby dia ao Ambohimahatsinjo ao andrefan'Ambohimalaza. Andrianakotrina moa araka ny lovantsofina dia andriana tompon'ny faritra akaikin' i Manandriana-Avaradrano sy Namehana iny tamin'ny andron-dRalambo. Fianakavian-dRalambo rahateo moa Andrianakotrina no nanoa azy, ary izy ihany koa no nitondra ny vary taty anivontany ka nosokajian-dRalambo ho isan'ny Zanadralambo izy .
3) Misy koa ireo hova nataon'ny Mpanjaka Andrianampoinimerina ho isan'ny andriana ka nosokajiana ho Zanadralambo izy ireny. Tany amboalohany dia tsy nanaiky hifanambady tamin'ireo nasondrotra andriana ireo Zanadralambo na taranaka na fianakavian'ny Mpanjaka Ralambo na dia nanaiky ny maha Zanadralambo ireo hova natao ho andriana ireo. Saingy tato aoriana dia nifanakalo vady amanjakanaka izy roa tonta. Isan'ireny natao ho Zandralambo ireny i Raberanto sy ny fianakaviany tao Ambodifahitra.
Mbola maro koa ireo vohitra no mitonona ho isan'ny Zanadralambo ary mety ho tena Zanadralambo tokoa saingy tsy noeken'ny mpanjaka nifandimby ho isan'ny Zanadralambo izy ireny. Misy amin'ireny vohitra ireny aza no niandry amanjataona maro vao noeken'ny mpanjaka tato aoriana fa isan'ny Zanadralambo raha tsy nanaiky izany ny mpanjaka tany aloha. Isan'izany ny Zanadralambo amin'ny Vakinisisaony.
Fehiny, ny teny hoe Zanadralambo dia tsy midika avy hatrany fa taranaky ny Mpanjaka Ralambo. Marihina anefa fa nanana ny maha izy azy manokana amin'ny Zanadralambo ny terak'Andriampanarivomanga ao Lazaina sy ny terak'Andriampolofantsy ao Atsomangy ary ny terak'i Raberanto ao Ambodifahitra. Teraky Lazaina i Rabedasy izay lehiben'ny Zanadralambo rehetra tamin'ny [Ranavalona III]. Tamin'ny Zanadralambo rehetra dia Raberanto sy ny ankohonany avy ao Ambodifahitra no hany nomen'Andrianampoinimerina zaratany tao amin'ny faritra voahodidina hadivory manodidina an'Andohalo tao Antananarivo ka niaranonina tamin'ny solotenan'ny Andriamasinavalona,ny Andriandranando, ny Andrianamboninolona, ny Andriatompokoindrindra, ny Andriandoriamanjaka, ary ny Zazamarolahy teo.
NY TOERANA AHITANA AZYHanova
Saika nahitana ny Zanadralambo ny lafivalo teto Imerina. Tamin'ny nanjakan-dRalambo dia teo saika nanodidina ny vohitr'Ambohidrabiby Hasin'Imerina iny no nonina ireo Zanadralambo dia tao Ambohidrabiby, Falimanjaka, Ankorombe, Ambodifahitra, Lazaina, Antsomangy, Manandriana, Ambatofotsy, Ambohidrano Antsinanana,Andranovelona, Ambohimahatsinjo ary amin'ny faritra atsimo ao Kilonjy. Tato aoriana dia niely tsikelikely teo amin'ny fanjakan'Imerina ireny Zanadralambo ireny satria ny Zanadralambo dia tsy mba nahazo nivoaka ny faritry Imerina Enitoko ny Zanadralambo ka avy amin'izany ny fiteny hoe Zanadralambo Enintoko. Amin'ny lafiny atsimo ao Ikilonjy sy amin'ny lafiny atsimo ao amin'ny rovan'Ambohijanaka dia misy Zanadralambo. Eny hatrany amin'ny vakinimananara amin'ny faritr'Anjozorobe dia misy Zanadralambo. Ireo andriana ambony firazanana araka ny vanimpotoana nifandimby ihany no nanana zo hivoaka ny Imerina raha hanitatra fanjakana na hametrampihavanana amin'ny fanjakana manodidina na hanorina fanjakana mihintsy.
Ny zanadralambo dia nanana andraikitra manokana teo amin'ny Fanjakan'Andriana. Ny Zanadralambo dia loharanon'Andriana manjaka. Natao isan'ny mpanozondoha na mpanome tangena ny Zanadralambo. Raha nisy mpanjaka efa hiamboho (manary aina) dia ny Zanadralambo no antsoina hialany aina sy hiamparany. Tato aoriana dia natao isan'ny mpamono fatin'andriamanjaka ny Zanadralambo satria tsy misy mahazo mikasika ny taolambalon'ny mpanjaka raha tsy andriana ny firazanany dia nisy Zanadralambo nahazo nanao izany. Nisy tamin'ny Zanadralambo koa anefa toy ny ao Manadriana Avaradrano no nahazo andraikitra ho mpanenona ny firavaka volamena sy volafotsin'ny Mpanjaka.Hatramin'ny andron-dRalambo rainy hono dia Andriamasoandro no mpitohy sy mpanamboatra ny voahangy sampan-dRalambo. Ny Zanadralambo avy amin'ny fianakavian-dRabedasy kosa no nanefy ny volan'ny fanjakana merina ary Rabedasy no lehiben'ny Zanadralambo tamin'ny faran'ny fanjakan'andriana malagasy.
Ny samy Zanadralambo dia saika nifanambady. Tsy lova tsy mifindra anefa izany noho ireo Zanadralambo samy hafa reny ary mety tsy ho taranaky Ralambo mihintsy ny sasany aminy. Tsy mba nanana sampy manokana koa ny Zanadralambo raha nanan ny azy manokana ireo sokajin'andriana sasany, angamba noho ny maha samy hafa reny ireo vohitry ny Zanadralambo maro. Mampiavaka ny Zanadralambo koa dia ny ady filaharana sy fizokiana nisy teo amin'ireo vohitra misy ireo Zanadralambo taranaky ireo vadikelin-dRalambo, ady fizokiana izay tsy fahita amin'ireo sokajin'andriana hafa.Na izany aza, dia saika nanankarena ireo Zanadralambo.
Hita tao amin'ny "https://mg.wikipedia.org/w/index.php?title=Zanadralambo&oldid=692282"
Dernière modification le 31 Jolay 2014, à 09:12
Voaova farany tamin'ny 31 Jolay 2014 amin'ny 09:12 ity pejy ity.